तनावले सुगर भयो - Naya Patrika
तनावले सुगर भयो
विश्वास खड्काथोकी काठमाडाैं, १७ पुस | पुष १७, २०७४
तनावले सुगर भयो – डाक्टरहरू अरूको उपचारमा कटिबद्ध हुन्छन् । तर, आफ्नो स्वास्थ्यबारेचाहिँ कत्तिको सचेत हुन्छन् त ? यसको जवाफ खोज्ने क्रममा यसपटक हामी वीर हस्पिटल पुगेका छौँ । वीर हस्पिटलका इमर्जेन्सी वार्ड प्रमुख डा. केदार सेन्चुरीको स्वास्थ्यबारे नयाँ पत्रिकाका विश्वास खड्काथोकीले सोधेका छन् :
इमर्जेन्सी वार्ड प्रमुख, वीर अस्पताल
रोगले डाक्टर भन्दोरहेनछ । म मधुमेह (सुगर)बाट ग्रसित छु । १० वर्ष भयो मधुमेह लागेको । त्यसैले स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन आवश्यक छ र छु पनि । सुगरलाई पूर्ण रूपमा निको पार्न पनि सकिँदैन । नियमित औषधि सेवन गरिरहेको छु ।
सुगरको ९० प्रतिशत अदृश्य कारण हुन्छन् । मेरो पनि चेकजाँच गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तो कुनै कारण देखिएको छैन । वंशाणुगत कारण पनि होइन । मलाई चाहिँ तनावको कारण सुगर भएजस्तो लाग्छ । लामो समय घरबाट बाहिर बस्नुपर्‍यो, हस्पिटलमा मात्र नभएर क्लिनिकमा पनि समय दिइरहनुपर्ने । आफ्नो लागि त्यति धेरै समय नहुने । यस्तै कारण एक समय ममा अत्यधिक तनाव थियो । यही नै मेरो रोगको कारक होजस्तो अनुभव हुन्छ ।
सुगर भयो भने सुरुमा व्यायाम गर्ने हो । व्यायामले ठीक भएन भने औषधि सेवन गर्नुपर्छ । र, औषधिले पनि केही लागेन भने इन्जेक्सन हान्नुपर्छ । मैले चाहिँ नियमित व्यायाम गर्नुका साथै औषधि पनि लिइरहेको छु ।
म बिहान ५ देखि साढे ५ सम्ममा उठिसक्छु । बिहानको नित्यकर्म सकेर मर्निङवाकमा निस्कन्छु । दैनिक आधा घन्टाजसो मर्निङवाक गर्छु । घर फर्केर नुहाउँछु । अनि ब्याडमिन्टन खेल्छु । खासमा खेल मेरो रुचिको विषय पनि हो । कहिलेकाहीँबाहेक म खेलिरहेको हुन्छु ।
बिहानको समयमा पानी र चिया मात्र प्रयोग गर्छु । एकैपटक १ बजे लन्च हुन्छ । लन्च पनि घरबाटै लिएर जान्छु । र, दिउँसो ५ बजेतिर खाजा खान्छु । कहिले रोटी त कहिले के खाइरहेको हुन्छु । ६ दिनमा ६ भेराइटीका खाजा हुन्छन् । फलफूलचाहिँ कहिल्यै छुटाउँदिनँ । म गुलियो चिज धेरै खाँदिनँ । मेरो रोगले पनि यस्तो कुरा प्रयोग गर्न बन्देज गर्छ ।
बेलुकी प्रायः रोटी र साग खाने गर्छु । हप्तामा ६ दिन मिक्स भेजिटेबल त हुन्छ नै । दुईपटक मासु खान्छु । मलाई माछा अत्यन्तै मन पर्छ । तर पनि हप्तामा एकपटकभन्दा बढी खाने गरेको छैन ।
धेरै डाक्टर हेल्थमा कन्सस हुँदैनन् । जसकारण कतिपय साथीले अकालमै ज्यान पनि गुमााइरहेका छन् । मलाई पनि कहिलेकाहीँ के होला र भन्नेजस्तो लाग्छ । तर, रगत भने प्रत्येक तीन–तीन महिनामा जाँच गर्छु । अहिलेसम्म होलबडी जाँच गरेको छैन । आवश्यकताअनुसार गर्छु ।
मेरो त्यस्तो कुनै अम्मल छैन । ड्रिंक्सचाहिँ सोसल रूपमा गर्छु तर लतको रूपमा होइन । घरमा एक्लै भने अहिलेसम्म लिएको छैन । साथीहरूसँग भेट हुँदा सामान्य गरिन्छ । तर, भ्यालीबाहिर हुँदाचाहिँ प्रत्येक शुक्रबार खाने गर्थें । खासमा मैले पोखरा, दाङलगायत थुप्रै ठाउँमा पुगेर सेवा गरेँ । त्यहाँ हुँदाचाहिँ खाइन्थ्यो ।
काठमाडौंको वातावरण अत्यन्तै नराम्रो छ । यहाँको वातावरण देखेर दिक्क लागेर आउँछ । घरनजिकै बाटो पर्ने भएकाले पनि धुवाँ, धुलो र कोलाहलमा बस्नुपरेको छ । त्यसैले अलि टाढा शान्त ठाउँमा गएर बसौँ कि भन्ने पनि लाग्छ । तर, जागिर र छोराछोरीको पढाइले त्यो पनि दिँदैन ।